TTSweet: Screw Driver ကိုင်ခဲ့ရ ကျွန်မဘ၀ပါရှင် (၂)...
Posted by T T Sweet at 3:46 AM
Sunny January 4, 2011 at 5:10 AM
တီဆွိရဲ့  အလုပ်အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် စောင့်မျှော်နေပါတယ်.. :)
အို..တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ.. မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီနေ့မှာ အချစ်ဆုံး တူလေး လူ့လောကထဲစရောက်ခဲ့တာ။
rose January 4, 2011 at 6:25 AM
တီဆွိရဲ့ အလုပ် အတွေ့အကြုံလေး လာဖတ်သွားပါတယ်။ အိုးးး ၁၁ နှစ်တောင် ရှိပြီလား တီဆွိ အလုပ် လုပ်နေတာ။ တော်တော် ကြာပြီပဲနော်။ အစစ အဆင်ပြေပါစေရှင်။
ရန်ကုန် ပြန်လည်တာ တော်တော် ပျော်ခဲ့မှာပဲနော်။ မြန်မာပြည် အလွမ်းပြေ အစားအစာ ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်ပါဦး တီဆွိရေ....။
Moe Cho Thinn January 4, 2011 at 9:31 AM
ပထမဆုံးအင်တာဗျူးမှာပဲ အလုပ်ရတာဆိုတော့ ကံကောင်းတာပဲ။ ဒါ.. ဥပဓိ နဲ့ ဆိုင်တယ် မမ.. :))
သက်ဝေ January 4, 2011 at 1:00 PM
အလုပ်လုပ်တာ ၁၁ နှစ်... လေးစားပါတယ်...
11th Anniversary Celebration လုပ်ရက် ကောင်းမှာပဲ...
မေးခွန်း ။ ။ ဟောလီးဒေးနေ့ရက်များကို သွားလာလည်ပတ်ခဲ့သော နေရာများ၊ စားခဲ့သော အစားအသောက်ပုံများနှင့်တကွ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖေါ်ပြပါ...း))
T T Sweet January 4, 2011 at 2:30 PM
အန်တီသက်ဝေ လုပ်ချင်တယ်။ အဲဒီအထိမ်းအမှတ်တော့ ဟုတ်ပါဘူး။ တူနယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ချင်လို့။ ဟောလီးဒေး ပုံတွေက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ တင်ပြီးပြီလေ။ အများကြီး မရိုက်ခဲ့ရဘူး။
မချိုသင်းကပြောတာ ဖြစ်နိူင်တယ် ... ဟီးဟီး ... နောက်တာနော်။
Vista January 4, 2011 at 3:08 PM
အမင်းစားလက်မှတ်တွေများဂျီးပဲနော် .. အားကျထှာ .. ဟိဟိ
SHWE ZIN U January 4, 2011 at 3:21 PM
ဆက်လက်စောင့်မျှော်နေပါတယ် အလုပ်အတွေ့အကြုံလေး တွေ ရေးပြအုန်းနော်
Mg Kyaw Zaw January 4, 2011 at 5:20 PM
ချစ်ကြည်အေး January 6, 2011 at 12:58 AM
တူတူပဲ ဆွိရေ တို့လည်း အလုပ် စလုပ်တုန်းက တောသူမြို့ရောက်ပဲ။ ကုတ်အင်္ကျီကြီးဝတ်လို့ ဟိဟိ...။ ခုတော့ အေးဆေးဖြစ်သွားပြီ။ ဆွိက အလုပ်ကံကောင်းတာပဲ။ တက်ဝေ ပြောသလို အလုပ်လုပ်တာ ၁၁နှစ်ပြည့် စားပွဲလေး လုပ်ပါလား၊ ရက်ကျော်သွားပေမဲ့ ဘက်ဒိတ်နဲ့ စားပေးပါ့မယ် ငှဲငှဲ....:)
tin min htet January 6, 2011 at 1:03 PM
တီတီဆွိက တကယ့် အင်ဂျင်နီယာပဲ။ ကျွန်တော်က လုပ်သက် ၁၅ နှစ်၊ လခစား အလုပ်က ၈ ခု၊ လခစား အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ ကြားဖောက် အလုပ်လေးတွေ လုပ်လိုက်သေး၊ ။ အင်တာဗျူးကတော့ နင်လား ငါလား တခါမှ မဗျူးဖူးဘူး။ အလုပ် ၈ ခုလုံး မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေက ထောက်ခံ မိတ်ဆက်ပေးတာ ချည်းပဲ :P
tin min htet January 6, 2011 at 4:30 PM
ပြောဖို့ မေ့သွားလို့ -
တီတီဆွိက သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ရင်၊ အမြဲ အိုးမဲသုတ်ပြီး ရိုက်တယ်နော် :)
T T Sweet January 6, 2011 at 7:50 PM
ကိုထက်တို့ကတော့ နောက်ဖြစ်အောင် နောက်လိုက်သေးတယ်။ မိုးရွာနေလို့ ထီးလေးဆောင်းပြီး ပြန်လာတယ်ပေါ့။
အိုးမဲက ခုမှသုတ်တာအေ့။ နောက်မှို့ဆို အန်တီဆွိတီဆိုတာ အဲဒီအစ်မင်္ကြီးပါလားဆို အကြွေးရှင်တွေ လိုက်တောင်းနေရင် မခက်လား ...း))
ဖိုးတုတ် January 8, 2011 at 2:17 AM
အောင်မြင်မူများအတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ် ၊ အပိုင်း ၃ ကို မျှော်နေပါ့မယ် ၊
တကယ်ကို အားကျပါတယ် အမရေ။ ဒီမှာ ၂နှစ်တောင် မပြည့်သေးဘူး။ အားကုန်ချင်လာလို့...
Unknown February 29, 2012 at 9:47 PM
11yrs experiences... woow. amazing ama..a htet ka anonymous pyaw ta lo pae.... အားကုန်ချင်လာလို့...I just have 3yrs experiences.
T T Sweet March 7, 2012 at 12:25 AM
ဟုတ်တယ် Tsu ရေ။ R&D မှာ ၁၁နှစ်ကျော်လုပ်ခဲ့တယ်။ စင်္ကာပူမှာတော့ R&D အလုပ် အရမ်းပေါတယ်။ ဒီလောက် အတွေ့အကြုံနဲ့ အလုပ်တစ်ခု အလွယ်တကူရနိူင်တယ်။ အော်ဇီမှာတော့ R&D က တော်တော်ရှားတယ်။ please keep trying hard, times fly.
Unknown March 10, 2012 at 8:30 PM
ဆု က civil က ပါ.. R&D တော့ တ ခါ မှာ့ မလုပ် ဖူး ဖူး... အမ အား ရင် သို့မဟုတ် ရေးလို့အဆင်ပြေရင် အ လုပ်တွေ့ ကြုံလေးတွေရေး ပါ အုံး ..အမအရင်ကရေးထားတွေဖတာ ရပါ တယ်.. ဆု တို့လိုfresher တွေ အတွက် ကအတုယူစရာပါ... အလုပ်မှာ ဗမာအပေါင်း အသင်း၊ နိုင်ငံခြားအပေါင်းအသင်း၊ ပြဿနာဖြေရှင်း ပုံလေးတွေ ပေါ့အမ ရယ်.. တချို့တွေက လည်းရေးလို့ရချင် မှ ရ မှာ.. အလုပ်confidential တွေ ရှိတော့.. ရေး လို့ ရတာလေးတွေ အတုယူလို့ရအောင်တဆင့်မျှဝေပေး ပါ.. ကျေးဇူးတင်လျက်
P.S ယခင် က တင်ပေးထားတဲ့ post တွေ အတွက်လဲကျေး ဇူး ပါ.. ဦး ခြိမ့် ကိုရော ပေါ့..
T T Sweet March 15, 2012 at 1:52 PM
ရေးချင်တယ် အတွေ့အကြုံတွေ မေ့မသွားခင်။ လူကလဲ ရေးစရာတွေ တစ်ခါတစ်လေလဲ အရမ်းများတယ်။ တစ်ခါတစ်လေလဲ ဘာရေးရမှန်းမသိဘူး။ တစ်ခါတစ်လေလဲ ရေးရမှာ ပျင်းနေတယ်။ ဆုဆုတို့လို အားပေးမဲ့သူတွေရှိရင်တော့ ရေးရတာ အားတက်တယ်.. ကျေးဇူးနော်။
Unknown March 28, 2012 at 7:06 PM
ဆု ကလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလို experience, knowledge တွေ ဖြန့်ဝေပေးတဲအတွက် ပါ။